नाता फेरेर भारतीयलाई नागरिकता – The Public Today
विजय कुमार सिंह असार ८, २०७७ ८:५४ am
जनकपुरधाम, असार ८ गते । २०६३ सालमा गाउँ—गाउँमा नागरिकता बाँड्ने टोली परिचालन पुग्यो। नागरिकता लिन मानिसको ताँती नै लाग्यो। कोही देशबाट घर फर्किए भने कोही विदेशबाट। भीडमा पसेर नेपालीले मात्रै होइन्, भारतीय नागरिकले पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए। यस्तै भीडमा पस्नेमध्ये थिए, एक सीतामढी मनपौरका एक भारतीय नागरिक। जसले स्थानीय राजनीतिक दललाई मासुरक्सीको भोज खुवाएर नेपाली नागरिकता हात पारेका थिए।
वडा अध्यक्षको पनि भारतीय नागरिकता
नेपाल–भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। त्रेताकालमै भगवान राम–सीताको विवाहले कायम गरेको नेपाल र भारत नाताकुटुम्भको सम्बन्ध अहिले पनि समाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक रुपमा अझै काम छ।
यही सम्बन्धलाई दुरुपयोग गर्ने पनि धेरै छन्। आफ्ना भारतीय ज्वाँईलाई छोरा बनाएर नेपाली नागरिकता दिलाउने पनि छन्। यसले गर्दा भारती रातारात नेपाली भएका छन्। भारतमा पनि नेता चुन्छन्, नेपालमा पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्छन्।
२ पुस २०७५ मा महोत्तरीको इलाका प्रशासन कार्यालय गौशालाबाट भारतीय नागरिकलाई आफ्नो छोरा भनेर नागरिकता दिलाउन लागिएको अवस्थामा प्रहरीले सासू र ज्वाँईलाई नियन्त्रणमा लिए।
औरही नगरपालिका–३ बस्ने ३९ वर्षीया सिवो देवीले आफ्ना ज्वाइँ भारत विहारको मुजफ्फरपुरको शिवदासपुर दौरा असली पञ्चायत–६ बस्ने २१ वर्षीय राजपाल सहनीलाई छोरो भन्दै नागरिकता दिलाउन सनाख्त गरेकी थिइन्। सासू सिवोले ज्वाइँ राजपाललाई आफ्नो छोरा सरोज सहनी बनाइ नागरिकता दिलाउनका लागि झूटो विवरण पेस गरेकी थिइन्। प्रशासनले प्रमाणमा शंका गरेपछि अनुसान्धान थालेका थिए।
छानबिनको क्रममा राजपालको साथबाट भारतीय आधारकार्ड र सवारी चालक अनुमतिपत्र बरामद भयो। त्यसैगरी धनुषामा पनि झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता बनाउन खोज्ने ज्वाइँ–ससुरा ७ महिना अघि पक्राउ परे। झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पुगेका धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका– २ का जीतनारायण यादवले भारतीय ज्वाइँलाई छोरा भन्दै नागरिकता बनाउन पुगेका थिए। नागरिकता बनाउने बेलामा कर्मचारीलाई कागजातमा शंका लागेपछि जीतनारायण र उनका ज्वाइँ भारत विहार राज्यको मुजफरपुरका सुनिलकुमार यादवलाई पक्राउ परेका थिए।
नागरिकता बनाउन धनुषाधाम नगरपालिका– २ का वडाध्यक्षले सिफारिससमेत गरेका थिए। त्यही सिफारिस लिएर उनीहरू नागरिकता बनाउन खोजेका थिए। स्रोतका अनुसार वडाध्यक्षलाई उनीहरूले घुस खुवाएर नागरिकताका लागि सिफारिस लिएका थिए।
भरतीयले नेपाली नागरिकता लिन नेपालमा रहेका नातागोताबीचको रिस्ता(सम्बन्ध) फेर्ने गरेका छन्। २५ असार ०७१ म महोत्तरीमा रहँदै आएका मामालाई बुवा बनाएर नागरिकता लिदैं गर्दा भारतीय नागरिक पक्राउ परे।
भारत विहार राज्यको मधुवनी जिल्लाको मधवापुर थानाअन्तर्गत रामपुर बस्ने राजाराम ठाकुरले महोत्तरीको तत्कालीन बथनाहा गाविस– ४ बस्ने मामा दशरथ ठाकुरलाई नक्कली बुबा बनाई २०४४ फागुन २५ गते टोलीमा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए।
ठाकुर आफ्नै बाबु रामप्रित ठाकुरसँगै महोत्तरीकै पर्सा पतैली– ३ मा घर बनाई बसोबास गर्दै आएका छन्। पर्सा पतैली– १ बस्ने सुजीतकुमार चौधरीले २०७० मङ्सिर २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको जाहेरीका आधारमा ठाकुरलाई पक्राउ गरी नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा चलाइएको थियो।
भारतीयले नेपाली नागरिकता लिने क्रम २०६३ सालमा बढ्यो। गाउँगाउँमा जब नागरिकता टोली पुग्यो, त्यसपछि नेपालमा रहँदै आएका भारतीयले नक्कली नाता खडा गर्दै नेपाली नागरिकता हात पारे।
महोत्तरीका एक राजनीतिकर्मीका अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्र नजिकैको भारतीयले नेपाली नागरिकता लिए। नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका, ससुराली भएका, तस्करी गर्ने ब्लेकिया, अपराधी गिरोहले नेपालमा रहेका आफन्तालाई नक्कली बुवा, आमा नागरिकता लिए।
विगतमा नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसुस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने कदम चाल्यो। त्यस अनुरुप २०६३ साल कात्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन, २०६३ बनाएयो।
यो ऐन नागरिकता पाउन नसेका नेपाली नागरिकताका लागि बनाइएको थियो।तर, मधेशका जिल्लाहरुमा भारतीयलाई तीनका नेपालमा बस्ने आफन्तजनले नेपाली हो भन्दै छोरो, नाती, बुवाको नक्कली नाता कायम गर्दै भारतीयलाई नागरिकता दिलाइयो। नागरिकता बाँड्दा घुसपैठ भएको प्रशासनले पत्तै पाएन। कतै आर्थिक लेनदेनमा त कतै प्रलोभनमा परे राजनीतिक दल तथा प्रशासनले छानविन नगरि नागरिकता बाँड्दा नेपाली नागरिकता भारतीयको हातमा पुग्यो।
नागरिकता वितरणमा सरकारका प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक सयन्त्र चुक्दा भारतीयको हातमा नेपाली नागरिकता परेको राजनितिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभले टिप्पणी गरेका छन्। ‘भारतीयले नेपाली नागरिकता लियो, त कसले दियो ? नागरिकता दिने मान्छेको खोजी हुनु पर्छ कि पर्दैन’, उनले भने,‘ नागरिकता बस र रेलको टिकट हो र ? जसलाई पनि दिन र दिन मिल्ने ? को थिए त्यस्ता अपराधी ? जसले भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिए ? ’ बदमासी गरेकालाई अनुसन्धन गरेर कारवाही गरिनु पर्छ तर, त्यसको आडमा मधेसीलाई बैचारिक रुपले होच्चाउनु, अक्रमण गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए।
विदेशीले नागरिकता लिए यस्तो हुन्छ कारबाही
नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (१) मा विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी नागरिकता लिने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। यस्तै दफा २१ कै उपदफा २ मा नागरिकता दिलाउन सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा राजकरण महतोले लेखेका छन् ।